Arts | Dr Ko Ko Gyi's Blog
၀မ်ကိုက်ရွာကို အခု မီးရှို့နေပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း ရဲ နဲ့ တပ် ဘာမှ မလုပ်ပါ။ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ေ၇းမှူးကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး အဖျက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နေ
My Friends wrote:
နောက်ဆုံး သတင်းဝင်လာပါတယ် ၀မ်ကိုက်ရွာကို အခု မီးရှို့နေပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း ရဲ နဲ့ တပ် ဘာမှ မလုပ်ပါ။ မြို့ခံ ဗုဓ်ဓဘာသာ ၀င်များကိုယ်တိုင်ပြောစကားအ၇ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ေ၇းမှူးကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး အဖျက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ် ။ ၀မ်ကိုက်ရွာဆိုတာ တချိန်က အစ်စတင်မာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ရွာလို့ သိ၇ပါတယ်။
မြို့ခံ ဗုဓ်ဓဘာသာ ၀င်အားလုံးလိုလို က ရဲတာဝန်မကျေလို့ လိုပြောပါတယ်
Tags:Arts, Comedy, Friends, Libraries, Programs, Sitcoms, Television, United States
စိတျအခနျ့မသငျ့ ဖွဈနပေမေဲ့ အဖှားကို ဂရုမစိုကျဘဲ မနနေိုငျတဲ့ အဖိုးကို တှတေ့ော့ ကိုယျ့ကို ကိုသတိရလို့ share ပါတယျ …
စိတ်အခန့်မသင့် ဖြစ်နေပေမဲ့ အဖွားကို ဂရုမစုိုက်ဘဲ မနေနုိုင်တဲ့ အဖိုးကုို တွေ့တော့ ကိုယ့်ကို ကိုသတိရလုို့ share ပါတယ် …
Unexpectedly my post for Thida is 3000th. posting in my blog.
Watch this YouTube “When I’m Sixty-Four- The Beatles” as suggested by my brother SMAR Nyi Nyi. Now I am 63 yrs old. The Beatles just sing for the far future at that point of time. Although it isavery near future for me, I don’t know whether I will still be alive next year, at the age of 64 as my health is deteriorating.
The most romantic story isn’t Romeo and Juliet who died together , its grandma and grandpa who grew old together ♥
more quotes at Inspirational quotes about life ♥
Tags:Arts, Juliet, Literature, Romeo, Romeo and Juliet, Shakespeare, Tragedies, World Literature
ရခိုင်ပြည်နယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင် ဇာဂနာနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Source: FB of Zaw Min Tun
တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းဖို့ လူမှုဆက်ဆံရေးသဟဇာတဖြစ်ဖို့ အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလူမှုဆက်ဆံရေးသဟဇာတ (social harmony) ဖြစ်ဖို့အတွက် အားလုံးမှာ ကျင့်ဝတ်ရှိရမယ်။ အခုလို လူမှုဆက်ဆံရေး သဟဇာတမဖြစ်တာကြောင့် ပြည်တွင်းမှာ ပဋ္ဋိပက္ခတွေဖြစ်နေရတာပါ။ ကျင့်ဝတ်တွေထဲမှာမှယဉ်ကျေးမှုကျင့်ဝတ်ရှိဖို့က အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး လူကိုလူလို့မြင်ဖို့လိုပြီး တခြားဘာသာနဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာကို မစော်ကားရဘူးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇာဂနာကို မေးမြန်းပါတယ်။ တချို့ကိုကောက်နှတ်ဖော်ပြပါတယ်။
Tags:Aceh, Arts, Facebook, Harmonious society, James Cook University, Panglima Laôt, Politics, Wildlife Conservation Society
Radical Ultra-Nationalist Rakhine leader U Aye Maung’s inflammatory words
Radical Ultra-Nationalist Rakhine leader U Aye Maung’s inflammatory words:
Source: The Voice Weekly [VOICE OF THE WEEK]
“နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဝင်ပေါက် အနောက်တံခါးကို ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေက နှစ်ပေါင်းများစွာ အသေခံပြီး ဖြစ်ဖြစ် အငတ်ခံပြီး ဖြစ်ဖြစ် စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေက အကျင့်ပျက်ခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ ပိုက်ဆံပေးပြီး လိုချင်တာတွေ ဖန်တီးသွားခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ အောက်ခြေမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေက ကျွန်တော်တို့ နေခဲ့တဲ့ ခေတ် အဆက်ဆက် ပဲ ။
Tags:Animation, Arts, Burma, Muslim, Rakhine people, Rakhine State, Rohingya people, Voice Actors
ABSDF-NB Massacre by Artist Htein Lin – ကျနော် လူကက်ဆက် (ဇာတ်သိမ်း)
Artist Htein Lin – ကျနော် လူကက်ဆက် (ဇာတ်သိမ်း)
(၁၉၉၂ ဖေဖဝါရီ ၁၃ ရက် The Nation သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့် ဓါတ်ပုံ (ဝဲ မှ ယာ: ကိုကျော်နိုင်ဦး၊ မနန်းအောင်ထွေးကြည်၊ ကိုနိုင်ဝင်းအောင်၊ ကိုညီညီ၊ ကိုတိုးကြည်)
“တနေ့ကလည်း လူသုံးယောက် ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းရိုက်တာ၊ ဘယ်ရမလဲဗျ။ သူတို့က ဘူ။ ကျူပ်က ကုလားသုံးစီး။ (၀ါးဟားဟား)”
Tags:All Burma Students' Democratic Front, Arts, Htein Lin, Nation, Renaissance
Image by centralasian via Flickr
Last Curtain by Rabindranath Tagore
will take its leave in silence,
drawing the last curtain over my eyes. (more…)
Tags:Arts, Nobel Prize in Literature, Rabindranath Tagore
Unconquerable or undefeated or never surrender or…Invictus
The following poem was translated by Aung San into Burmese and published in Oh Wai magazine with very famous consequences.
Actually translated by Nyo Mya but Aung San refused to reveal the author and was expelled from university
Source: “What is the meaning of the poem Invictus?” in Answers.Com
Invictus, meaning “unconquerable” or “undefeated” in Latin, isapoem by William Ernest Henley.
The poem was written while Henley was in the hospital being treated for tuberculosis of the bone, also known as Pott’s disease. He had had the disease since he was very young, and his foot had been amputated shortly before he wrote the poem.
This poem is about courage in the face of death, and holding on to one’s own dignity despite the indignities life places before us.
Tags:Arts, Invictus, John Bunyan, Literature, Poetry, Robert Louis Stevenson, Treasure Island, William Ernest Henley
Tags:Arts, Burma, Camera, Kalaw, Photography, Princess Margaret, Princess Margaret Countess of Snowdon, Shutter (photography)
My baby Daryn love the Kookaburra-laugh
My 10 mts old grandchild likes this song and use to sing along this song. But she just just say loveee…loveeee when the real laryc is laugh.
Actually my baby Daryn know about LOVE from the song below, Barney – I Love You. When I sing along at, I love you, you love me, she used to turn around and look up at me withasmile. Since she was5mths old she likes to sit on my lap infront of the monitor.
Tags:Arts, Australia, Barney, Barney & Friends, Bird, Kookaburra, New South Wales, Sydney